ဒီနယူးယောက်မှာ စကားပြန် ဘာသာပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကုလသမ္မဂမှာများအလုပ်ဝင်နေပြီလားလို့ မထင်
ကြပါနဲ့နော်..အဟဲ..သူများတွေ UN မှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောရင် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေလုပ်ရလဲတော့
မသိဘူး။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြင်ဖူးတာက မင်းသမီးက ဘာသာပြန်ပေးတာလေ။ ထားပါတော့လေ..။ မယ်ငီးတ
အလုပ်ထဲမှာ အာချားဟဲရုပ်တွေကထင်းကနဲမြင်သာထင်သာရှိတော့ ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ ပြောစရာ
တောင်မလိုဘူး.နောက်ပြီး ဖီလစ်ပီနိုတွေ သူများတွေကကြည့်တာနဲ့သိတယ်။ အင်း..ကိုယ်တို့များကြတော့
အာရှခြင်းအတူတူ ဘားမားလည်းမသိ၊ မြန်မာလည်း နိုး..။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုရင်သိကြတယ်။
နိုင်ငံကဘယ်နေရာလည်းဆိုတာမသိကြပြန်ဘူး..အတော်ဗိန်းတာဘဲ..နော့်။ ကိုယ်တို့များ ငယ်ငယ်တုံးက
ပထဝီဝင် သင်တော့ တိုက်ကြီး(ရ)တိုက်တို့ နိုင်ငံတွေရဲ့မြို့တော်တွေအားလုံး အော်ဟစ်ကျက်မှတ်လာခဲ့တာ လက်တင်အမေရိက စပိန်စကားပြောတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကမဆို လာခဲ့သိတယ်။ နေရာဒေသတောင်ပြောပြ
လို့ရသေးတယ်။ သူတို့နိုင်ငံကိုကြားဖူးလားတဲ့..။ဟင်းဟင်း...ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်နော့်။ ဒင်းတို့က ဘာစာတွေသင်ပြီး ဘယ်လိုကျောင်းတွေများပြီးခဲ့ကြပါလိမ့်( အဲ..ဂလိုပြောလို့လည်း ရဘူးလေဟယ်။ ကိုယ်
တို့ပညာရေးစနစ်ကဟိုး..အောက်ဆုံးရောက်နေပြီ..တဲ့။ အင်း..စနစ်ထက်စာရင် စိတ်ဓါတ်တွေလည်းမနဲ
ပြန်ဆွဲထုတ်ကြရမှာပါဘဲလေ..) အဟဲ စပြီ..တခါခါအမှန်တရားလေးတွေနဲ့နဲနဲလေးတော့လေပေါချင်တာ
ကဲကဲ..လိုရင်းရောက်သေးဘူး..ဒီလို လူတွေကများတော့ မယ်ငီးကလည်းအလုပ်ထဲကလူတွေ နံမည်မမှတ်
မိနိုင်ဘူး။ ဒီကလူတွေလည်း မယ်ငီးနံမည်ရင်းကို စာလုံးပေါင်းဖတ်လိုက်ရင် တကဲ့ အိုးနင်းခွက်နင်းအသံနဲ့
လေ။ ဒီတော့ လိုရင်းတိုရှင်း မီးမီးဆိုတဲ့နံမည်ကိုဘဲ ခေါ်ပြီး တံဆိပ်ကအစ အဲဒီနံမည်နဲ့ဘဲထုတ်ပေးပါတယ်။
နံမည်ကလွယ်တာရယ် တချိန်လုံး ၃၂ချောင်းဖော်ပြီး သွားဖြီးပြီး တဟီးဟီးရီနေတတ်တဲ့ အကျင့်ရယ်နဲ့ လူသိ
များပါတယ်။ စပိန်စကားပြောတဲ့လူတွေဆိုရင် ကိုယ်က "အိုးလာ" လို့စနူတ်ဆက်လိုက်တာဘဲ..သူကလည်း "အိုးလာ"ဆိုရင်တော့" မွှီးဗြန်း" ပေါ့..ဒီလို တခွန်းစ ၂ခွန်းစလေးတွေတော့ မယ်ငီးတို့က အာဂုံဆောင်ထား
ပါးစပ်လေးတခွန်းလောက်ဟတာနဲ့ မနက်စောစောအလုပ်ထဲမှာ သူလည်းစိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်လည်းစိတ် ချမ်းသာကြည်နူးရတယ်လေ။ အဲ့လိုနေလာတာ ပြီးခဲ့တဲ့ တလကပေါ့.. Customer service က မယ်ငီးကို
Page ပါတယ်။ Khol's တို့ Macy တို့လို စတိုးဆိုင်ကြီးထဲရောက်ရင်ကြားဖူးကြမှာပါ။ သီချင်းသံတွေဖွင့်
ထားပြီး တခါခါ အလုပ်ထဲကလူတွေ စပီကာထဲကနေ တစုံတခု ပြောကြတာလေ။ များသောအားဖြင့်တော့
ဘယ်နေရာကို လာခဲ့ပါ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာလိုနေတာ..ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ဝေါ်ဂီတော်ဂီရေဒီယိုလည်းကိုင်
ထားရပါသေးတယ်။ အဲ့ထဲကနေလည်း လှမ်းခေါ်တတ်ကြတယ်လေ။
အော်..ခေါ်တော့လည်းသွားရတာပေါ့။ ဟိုရောက်တော့ ကိုးရီးယားအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီး ၂ယောက်ကိုတွေ့
ပါတယ်။ ကဲ..လာလာ မီးမီး နင်ဘာသာပြန်ပေးပါအုံးတဲ့။ ကြည့်..ဘယ်လောက်တုံးတဲ့ အမေရိကမမတွေ
လည်းဆိုတာ..အာရှအားလုံးက စကားတခုထဲဘဲပြောတယ်ထင်နေလား!!!! ဒါပေမဲ့ မယ်ငီးဘဲဟာ..ဘာရ
မှာလဲ..ခပ်တည်တည်ဘဲ..ခါးလေးကိုင်းပြီး အညာဟစိဟစိကနေ ရောလိုက်ပါတယ်လေ ။ ပြီးမှ အဲ့ မမကို လည်းလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ငါ ကိုးရီးယားမဟုတ်ဘူး။ ငါဘာပြောပေးရမလဲ..ပေါ့။ အော်..ငါက နင်သူတို့ စကားတတ်မယ်ထင်နေတာတဲ့။ အဲလို ဗိန်းပါတယ်ဆို...။ အဖိုးကြီးက Khol's card စာရင်းဖွင့်ထားခဲ့တာ
၄လလောက်ရှိပြီတဲ့။ ကဒ်ကမရသေးဘူး..။ယာယီကဒ်လေးနဲ့သုံးနေတာ သူတို့ဆီကိုလည်းစာရောက်တယ်
သူတို့မဖတ်တတ်လို့လေ။ သူတို့ကို ရုံးချုပ်ဖက်က ကဒ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဋ္ဌာနနဲ့ ဖုံးဆက်သွယ်ပြီး နံမည်လိပ်စာတွေ ဟိုကမေးမြန်းပြီး ကဒ်အသစ်ပြန်ပို့ပေးမဲ့အကြောင်း သူတို့နားလည်အောင် ပြောပေးပါတဲ့။ အိုကေ မယ်ငီး
ကကြီးရှပ်ရုင် ၃ကားတောင်ပြည့်အောင်ကြည့်ဖူးတာဟုတ်ဘူး..။ သူတို့စကားလည်း နားမလည်။ ဒါပေမဲ့
လွယ်လွယ်လေး..လာခဲ့။ Sir ဆိုတာ ကကြီးလို "ဆန်စေးနင်း" ဆိုလား "ဆန်ကြမ်းနင်း"ဆိုလားဘဲ..ဟီး ဆန်စီးဆိုရင်တော့ ထိုဖူးနွေးလေးနဲနဲနဲ့အသုပ်စားရရင်မိုက်စ်..^_^ ဆန်ကြမ်းဆိုရင်တော့ ထမင်းနဲနဲနင် မှာဘဲ နော့်..(ဟဟ..ပေါက်ကရရှစ်သောင်းဆို မယ်ငီးကထိပ်ဆုံးကပါဘဲး)))))
တကယ်တော့ လက်ဟန်တွေ အမူအယာတွေ ဘိုလိုရော ကြားဖူးနားဝတဲ့ ကကြီးတွေ တလုံးပြီးတလုံးပစ် သွင်း လိုက်တာဘဲ..အဲ..နားလည်တယ်တဲ့ဟီးဟီး....တကယ်ဆိုရင် စကားပြန်ပေးတယ်ဆိုတာ သူ့ရင်ဘတ် ထဲ ခဏဝင်ခံစားပြီး သူ့ကိုနားလည်ပေး လိုက်ရုံပါဘဲ အပိုမဆလာမပါဘဲ သာမာန်နေ့စဉ်ပြောနေသလိုပြော
ပြလိုက်ယုံပါဘဲ။ ဘယ်သာဘာမှ ဘယ်စကားမှ မလိုပါဘူး။ အမူအယာနဲ့လည်း ရပါတယ်လေ။လူတွေကို နားလည် သဘောပေါက်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့.. တာဆို သူတို့စကားနားလည်ပါပြီလေ။ ရုံးချုပ်ဖက်ကမေးတာ ခင်ဗျားတို့ကိုသေချာအောင်ပြန်မေးတာ နံမည်နဲ့လိပ်စာဖြေပေးပါဆိုပြီး၊ဟိုကမေးတဲ့အချိန်ကြမှဖုံးကို အဖိုး
နောက်တခါကျတော့ အောက်ထပ်က Cash ကောင်တာမှာ အဲ့လိုဘဲ..မီးမီးရေ..အမြန်လာခဲ့ပါ ဆိုတော့အ
ပြေးလွှားသွားတာပေါ့။ ဟိုကျတော့ အမျိုးသမီးတယောက် အဝတ်အစားတလှေလောက်ကိုင်ပြီး ဟား.... ဘလားဘလား...ဆိုပြီးသူ့စကားနဲ့အတင်းပြောတော့တာဘဲ..အဲအဲ..ခက်ပြီ..ဘာကြီးဒုံးဆိုတော့..ဝယ်ထား တဲ့အင်္ကျီကဆိုက်သေးနေလို့...ပြန်လှဲတာ။ တချို့ကလည်း ထပ်ဝယ်တာ။ ပြန်လှဲတာကတည့်လှဲချင်တာ တဲ့
ဈေးနူန်း မတူတော့ တည့်လှဲမရဘူးပေါ့..။ ကဲ..ဒီတခါတော့ သူ့ကို စကားမပြန်ခင် မမတွေကို အရင်ပြော ထားရတယ်။ လူတွေအများရှေ့မှာဆိုတော့ ခပ်ကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်တယ်။ ငါ မီးမီး ကိုးရီးယားမဟုတ် ဘူး...ကွ။ မြန်မာလို့အခုခေါ်တယ် အရင်က ဘားမား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံက ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့
ဖက်ခြမ်းက နယ်စပ်မှာမွေးကြီးခဲ့တာကွ။ ဘာသာစကား၎-၅ ခုလောက်ပြောတတ်ပေမဲ့ ဒီကိုးရီးယား ကို
တော့ လုံးဝမတတ်ပါဘူး..(ဘာရမလဲ ခပ်ထန်ထန်ပေါ့..ကကြီးတွေပြသာနာဖြစ်တိုင်းမယ်ငီးချည်းဘဲပင့်
နေတာ ဟုတ်သေးဘူးလေနော်..) ဒီတခါတော့ အဖွားကြီးကိုလက်ဆွဲပြီး တခါထည်းအပေါ်ခေါ်လာခဲ့ တယ်
လေ။ လမ်းမှာပြောချင်ရာပြောတာ သူက ရဲ့ ရဲ့ နဲ့ဘဲ..အင်း..နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီပေါ့ကွယ်။
အားလုံးပြီးရင် သူတို့ထုံးစံ ခါးလေးကိုင်း ပြီးတာ နူတ်ဆက်လိုက် အားလုံးငြိမ်းချမ်းသွားစေရမယ်..။
အဟဲ..ကဲ..ဘာသာပြန်ချာမကြီးရဲ့ ဘလော့ကလည်း log in ဝင်မရဖြစ်သွားလို့ အကြာကြီး ပစ်ထားသလို
Posted by မီးမီးငယ် at 8:59 PM
Labels: US-NJ, အတွေ့ အကြုံ
San Htun October 16, 2014 9:15 PM
မမီးငယ် အတွေ့ အကြုံတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်း၊ ဖတ်လို့ ကောင်း...များများရေးနော်..
မီးမီးငယ် October 18, 2014 8:56 PM
Thu October 16, 2014 10:27 PM
တီတီမီးရေ ကြည့်ရတာ ကိုရီးယားမလေးလိုဖြူဖြူချောချောမို့ထင်တယ် :D ကိုရီးယားစကားဆို တီတီကျူတီရှိတယ်လေ.သူ့ဆီပြေးသင်လိုက်ပါလား :P မှတ်စရာတစ်ခုတော့ရပြီ။"တကယ်ဆိုရင် စကားပြန်ပေးတယ်ဆိုတာ သူ့ရင်ဘတ်ထဲ ခဏဝင်ခံစားပြီး သူ့ကိုနားလည်ပေး လိုက်ရုံပါဘဲ အပိုမဆလာမပါဘဲ သာမာန်နေ့စဉ်ပြောနေသလို ပြောပြလိုက်ယုံပါဘဲ။ ဘယ်သာဘာမှ ဘယ်စကားမှ မလိုပါဘူး။ လူတွေနားလည် သဘောပေါက်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့.. တာဆို သူတို့စကားနားလည် ပါပြီလေ။"
မီးမီးငယ် October 18, 2014 8:57 PM
Ma Tint October 17, 2014 8:23 PM
အခုတော့ ဘလော့လေး ပြန်ဝင်လို့ရပြီမို့ မကြာခဏဖတ်ရတော့မှာပေါ့နော် ... :)
အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဖတ်သွားတယ် မီးမီးငယ်။
မီးမီးငယ် October 18, 2014 9:01 PM
Iora October 17, 2014 11:03 PM
မီးမီးငယ် October 18, 2014 9:10 PM
ကိုယ်တော့ ၃ ပတ်နီးပါးဘဲ
system tool ကနေ system restore
Iora October 19, 2014 11:16 AM
ဟုိုဖတ်ဒီဖတ်နဲ့ ပြန်ကုလိုက်တာ။ ပြန်ပြန်ရသွားတယ်။ ကြော်ငြာကွန်မန့် တွေကိုတော့တနေ့ ကစပြီး နေ့ စဉ်လိုဖျက်ပစ်နေတယ်။ ထိပ်ဆုံးက ဘောက်စ်လေးကို check လုပ်ပြီး delete လုပ်လိုက်ရင်တချက်တည်းနဲ့ အကုန်ပျက်တယ်လေ။ တခုချင်းဆုိုအချိန်ကုန်တယ်။
မြတ်ကြည် October 18, 2014 12:52 AM
ရယ်နေရတယ်။ နောက်ဆို အစ်မ ရုပ်ရှင် တစ်ကား ရိုက်လို့ရပြီ။ :D
မီးမီးငယ် October 18, 2014 9:11 PM
စူးနှယျလေး October 18, 2014 2:53 AM
စံပယ်ချို October 19, 2014 5:53 PM
မီးမီးငယ် October 21, 2014 7:24 PM
US-San Fransisco (1)
အတွေ့ အကြုံ (63)